တစ်ဦး Maiko လိုပဲဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ကိုဘယ်လို | Experience Japan
› ဘလော့ Myanmar › တစ်ဦး Maiko လိုပဲဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦး Maiko လိုပဲဝတ်စားဆင်ယင်ဖို့ကိုဘယ်လို
တစ်ဦးက Maiko ဖြစ်လေ့လာနေသူအမျိုးသမီးတစ်ဦးတစ်တံဆိပ်ဖြစ်ပါတယ်။ သူမသည်ပုံမှန်အားဖြင့်တစ်ကီမိုနို, ဂျပန်အတွက်တရားဝင်မတ်မတ်အဖြစ်ဝတ်ဆင်သောရိုးရာရှည်လျားသောအင်္ကျီကိုဝတ်ဆင်။ တစ်ဦးကကီမိုနိုကိုအများဆုံးဂျပန်အဝတ်အစားများ၏အသိအမှတ်ပြုပေမယ့်အသုံးအနှုန်းတစ်ချိန်ကဂျပန်ထံမှကွဲပြားခြားနားသောအဝတ်တစ်အကွာအဝေးကိုသိရှိနိုင်ဖို့အသုံးပြုခဲ့သည်။ Maikos အစပြုလာသောအခါ Maikos ရှေးဂျပန်ကနေသူတို့ရဲ့ counterparts တွေကိုကဲ့သို့ပိုမိုခေတ်မီခြင်းနှင့်ယဉ်ပေါ်လာဖို့ပိုရိုးရာအဝတ်အစားတွေနဲ့ထည်ဒီဇိုင်းများဝတ်ဆင်။
Datejime: ခါးပတ်ဟာ Obi ခါးပတ်အောက်မှာထိုင်ခြင်းနှင့်ပြီးပြည့်စုံကီမိုနို silhouetteသေချာကြောင်း:
Hanhaba နေ့စဉ်ကီမိုနိုနှင့်အတူလိုက်ဖက်ကြောင်း Obi
Koshi himo Cottonသည့်ကီမိုနိုရရှိထားသူကြောင့်ခါးပတ်။
1. ပထမဦးစွာယင်း juban လို့ခေါ်တဲ့စလစ်ပေါ်တွင်တင်နေသည်။ ဒါဟာအလင်းရေသုတ်ကုတ်အင်္ကျီနဲ့တူခံစားရသင့်တယ်နှင့်ခြမ်းမှာ snugly ချည်ထားရပါမည်။
အဆိုပါကီမိုနိုပေါ်တွင်တင်သောအခါ 2. ဒုတိယခြေလှမ်းဖြစ်ပါတယ်။ သင့်ရဲ့လက်ရုံးပိုးပြင်ကီမိုနိုအင်္ကျီ၏ထိပ်အလျားလိုက်အပေါက်မှတဆင့်သွားပါသင့်တယ်။ ဒါကြောင့်ပေါ်တွင်တင်နေသည်ပြီးနောက်, ဝတ်လုံ၏နောက်ကျော panel ကသင့်ရဲ့နောက်ကျောနှင့်အတူဗဟိုပြုနေသည်သေချာပါစေ။
3. ထို့နောက်လက်ဝဲမှပထမဦးဆုံးသင့်ရဲ့ခန္ဓာကိုယ်တစ်ဝှမ်းဝတ်လုံ၏ညာဘက်အခြမ်းခြုံ။ ပိုလျှံပစ္စည်းလည်းမရှိဆိုပါကဝတ်လုံသင့်ကျောဖို့ဝန်းကျင်သို့ရောက်ရှိကြောင်းအဆင်ပြေသည်။ အဲဒါကိုထပ်နေပါသည်ထို့ကြောင့်ဘယ်ဖက်ခြမ်းခြုံ။ ဖေါ်ပြခြင်းလျှင် juban စလစ် Adjust ။
အရပ်ဌာန၌ကီမိုနိုကိုစောင့်ရှောက်ရန် 4. ပထမဆုံးခါးပတ်ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါက koshi himo ဟုခေါ်သည်။ ပထမဦးဆုံးအသငျသညျနောက်ကွယ်ကခါးပတ် Hold နှင့်သင့်ရှေ့ကိုဖြတ်ပြီးကကြိုးနဲ့တုတ်။ အဆိုပါ koshi himo ခါးပတ်အရှေ့ဘက်မှာရှိတဲ့ပိုလျှံပစ္စည်းအောက်မှာဝှက်ထားလျက်ရှိ၏သို့မှသာအဆိုပါကီမိုနိုအင်္ကျီကိုယခုချိန်ညှိရပါမည်။
5. ယခုဒုတိယခါးပတ်ချည်ထားခြင်းဖြစ်သည်။ ဒါက datejime ဟုခေါ်သည်။ အဆိုပါ koshi himo နဲ့တူဒီခါးပတ်ကြိုးနဲ့တုတ်, သို့သော်ဤခါးပတ်သည့်ကီမိုနိုထိပ်ပေါ်မှာထိုင်နှင့်မြင်နိုင်သည်။
6. နောက်ဆုံးအလှဆင် Obi သို့မဟုတ်ခါးပန်းယခုချည်ထားရပါမည်။ တစ်ဦးကရိုးရှင်းတဲ့ Obi ခါးပန်းဟာ hanhaba ဖြစ်ပါတယ်။ သငျသညျအလုံအလောက်ပစ္စည်းနှင့်အတူတစ်ထုံးကိုကြိုးနဲ့တုတ်နိုင်အောင်ဒီခါးပန်းကြိုးနဲ့တုတ်မှပထမဦးဆုံးတဦးတည်းအဆုံးမှာခါးပန်းကိုတိုင်းတာ။ အဆိုပါ Obi ထားခြင်းများအတွက်ချောင်ပစ္စည်းဒီချန်ထားပါ။ သင့်ရဲ့နောက်ကျောဖို့ခါးပတ်၏ကျန် Hold နှစ်ခုစွန်းတိုင်အောင်နောက်ကျော၏အလယ်ဗဟိုတွင်ယခုတိုင်အောင်လှည့်ပတ်ခြုံ။
7. ယင်းနောက်နှစ်ခု Obi hanhaba အတူတူကုန်ဆုံးခြင်းနှင့်ခါးပန်းတင်းကျပ်ချည်နှောင်။ ဒါဟာလာမယ့်ခြေလှမ်းအဘို့အတော်လေးတင်းတင်းကျပ်ကျပ်ရောက်ထားရန်လိုအပ်ပါတယ်လိမ့်မယ်။ အဆိုပါ Obi ကြီးစွန်းတိုင်အောင်ယခု Obi သို့မဟုတ် datejime သို့တွေထဲမှာအောင်းနေနိုင်ပါတယ်ရပါမည်။ အဆိုပါ Obi အလုံအလောက်တင်းကျပ်စွာဖြစ်ပါတယ်လျှင်, ခါးပန်းထွက်ကျကြလိမ့်မည်မဟုတ်ပေ။ လူအပေါင်းတို့သည်ပြားအဆင့်ဖြစ်ကြပြီးဗဟိုပြုဒါကီမိုနိုအင်္ကျီကိုမှနောက်ဆုံးချိန်ညှိထားပါ။
တစ်ကီမိုနိုပေါ်ချပြီး၏နောက်ဆုံးခြေလှမ်းကိုရှေးခယျြဆံပင်နှင့်ဆက်စပ်ပစ္စည်းများ၏ပုံစံဖြစ်ပါတယ်။ ဤသည် Maiko တစ်ကီမိုနိုကိုဝတ်ဆင်သည်အခြားမင်းသမီးနှင့်ကင်းသတ်မှတ်အရာဖြစ်တယ်။ သူတို့ရဲ့ဆံပင်စတိုင်နှင့် accessorises ထွက်ရှိသည်အခြားရွေးချယ်မှုပိုရိုးရာနှင့်သာမန်ထက်ဖြစ်ကြသည်။ Maikos လည်းသူတို့မှာသူတို့ရဲ့လေ့ကျင့်ရေးအဘယ်ဇာတ်စင်ပေါ်တွင်မူတည်ပြီးကွဲပြားခြားနားသူတို့ကိုယ်သူတို့ဝတ်စားဆင်ယင်ခြင်းနှင့် style ။ တစ်ဦး Maiko ၏ပုံမှန်ဆံပင်စတိုင်လ်တစ် Bun ကဲ့သို့သောရိုးရှင်းပြီး updo ဖြစ်ပါတယ်။ သူတို့ဟာသူတို့ geisha မင်းသမီးဝတ်ဆင်သော wigs earnt ကြပြီမဟုတ်ကြောင်းသက်သေပြခြင်း, hairline မှာ unpainted အသားအရေတစ်တီးဝိုင်းကိုချွတ်ပြပါ။ သူတို့ရဲ့ updo နူးညံ့သိမ်မွေ့သောဆံပင်အဆင်တန်ဆာသို့မဟုတ် kanzashi နှင့်အတူအလှဆင်ထားသည်။ Maiko မတူညီတဲ့ရာသီသို့မဟုတ်အားလပ်ရက်သို့ချည်နှောင်ကြောင့်ပန်းပွင့် kanzashi ဝတ်ဆင်ရန်ကြိုက်တယ်။
နောက်ဆုံးဆက်စပ်ပစ္စည်းဖိနပ်, အိတ်များနှင့်ပရိတ်သတ်တို့ပါဝင်သည်။ တစ်ဦးကကီမိုနိုဟာ geta သို့မဟုတ် zori စတိုင်ဖြစ်စေ၏, ခြေနင်းတရံနှင့်အတူဝတ်ဆင်သင့်ပါတယ်။ ရှေးခယျြသောအလေးအိတ်ကိုလည်းကောင်းစွာအဖြစ်ပုံမှန်အားဖြင့်ပိုပြီးရိုးရာဖြစ်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားကီမိုနိုအိတ်ခေါ်အချို့သောလမ်းအတွက်ကီမိုနိုများထည်ကိုက်ညီနေကြသည်။ သူတို့ပုံမှန်အားဖြင့်အစဉ်အလာကီမိုနိုသင်္ကန်းဆင်တူထည်ထဲကလုပ်နေကြတယ်အဖြစ်သူတို့ကကီမိုနိုအိတ်ဟုခေါ်ကြသည်။ နောက်ဆုံးအနေနဲ့ဂျပန် maiko သူမ၏ပရိတ်သတ်မပါဘဲထွက်မသွားသင့်ပါတယ်။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်ထူစက္ကူထုတ် လုပ်. အရောင်များကိုတစ်ဦးအကွာအဝေးအတွက်ရရှိနိုင်ကြသည်။ တချို့ကတောင်မှတစ်စိတ်တစ်ပိုင်းဒီဇိုင်းများရှိသည်သို့မဟုတ်သတ္တုဆေးသုတ်ဖုံးလွှမ်းလျက်ရှိသည် – သို့မဟုတ်ပင်ကိုရွှေအရွက်! သူတို့ဗေဒရည်ရွယ်ချက်များအတွက်ပဲကျားကန်မဖြစ်သကဲ့သို့ဤသူတို့သပရိတ်သတ်တွေအရေးကြီးလှသည်။ Maiko ခုန်နှင့်လက်ဖက်ရည်အခမ်းအနားအပါအဝင်လှုပ်ရှားမှုများတစ်အကွာအဝေးအတွက်သူတို့ရဲ့ပရိသတ်တွေကိုအသုံးပြုပါ။ ဤရွေ့ကားများသောအားဖြင့်လွယ်ကူစွာများအတွက် Obi သို့မဟုတ်ပိုးခါးပတ်ထားကြသည်။
Maikoအိုဆာကာကီမိုနိုဂျပန်ယဉ်ကျေးမှုMaiko ကဖေးMaiko မီးဖိုချောင်Up ကို MakeShinsaibashi လိုပဲဝတ်စားဆင်ယင်